Ezinganeni enye yezintandokazi zemidlalo ibilokhu iyimdlalo ebhokisini le sandbox, kodwa esihlabathini kunamagciwane amaningi ngisho nezimpethu. Ungasindisa kanjani kusuka kulo mntwana? I-sandbox ingenye yezindawo ozithandayo. Futhi abazali kufanele bazame ukwenza le ndawo ibe ephephile futhi igcine imithetho yokuphepha phakathi nemidlalo ngesihlabathi.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ebhokisini le-sandbox ingane ingasengozini yokuthola izifo eziningi ezimbi. Ungathatha amaqanda e-helminth - ukutheleleka okuvame kakhulu komzimba wengane. Ngokuvamile, ukudlala nesihlabathi, ungabamba izinhlobo ezintathu ze-helminths: amapinki, ama-roundworms nama-toxocars. Kumele kukhunjulwe ukuthi phakathi nemidlalo ingane ingathola ukutheleleka kwezinye izingane ezinezifo ezingenangqondo ezifana nesifo samathambo noma isifo sofungal (isibonelo, i-ringworm).
Imithetho eyisisekelo yokuphepha yokudlala nesihlabathi:
Khetha indawo yokudlala. Ema-sandbox ajwayelekile asemagcekeni noma e-kindergartens, kunengozi eyengeziwe yokwenza isivumelwano ngenxa yokuthi amakati nezinja ezilahlekile ziyafinyelela kubo, abantu bangaphonsa ama-butt, amabhodlela, nokunye okunjalo. Akufanele uvumele ingane ukuthi idlale kulawo mabhokisi e-sandbox emagcekeni asezidolobheni angagciniwe.
Kuphephile ukuletha umntwana ogwini. Ebhishi kusukela ekushiseni nokushisa kwesihlabathi, izimpungushe eziningi ziyafa, ngakho ingozi yokutheleleka kwengane ngesikhathi semidlalo nesihlabathi isinciphisa kancane.
Umthetho oyinhloko phakathi nemidlalo esitolo se-sandbox ukuvinjelwa okuphelele kunoma yikuphi ukudla okulula esihlabathini. Lokhu akuyona ingqondo, ngoba izandla zomntwana zingcolile futhi zingaba nama-bacteria amaningi. Geza njalo izandla zakho emgwaqweni ngeke usebenze. Kubalulekile ukubuka njalo ukuthi ingane ayitholi amathoyizi ebhokisini le-sandbox futhi ayizami isanti. Udinga ukuxwayisa ingane ukuthi awukwazi ukuphonsa isihlabathi kwezinye izingane, ungadlali nezinto ezitholakala esihlabathini. Kwabancane kakhulu, kunoma yikuphi, ukuphathwa kwabantu abadala kuyadingeka ukugwema inkinga.
Uma kukhona amanxeba avulekile, ngenxa yezizathu zokuphepha, kungcono ukuhlehlisa umdlalo ngesihlabathi baze baphulukiswe ngokugcwele.
Ingane ayikwazi ukudlalwa emhlabathini obandayo noma omanzi, akumelwe simvumele ukuba ahlale kuye, angase abe nesifo senqubo ye-genitourinary. Lokhu kubaluleke kakhulu emantombazaneni - izifo ezivuthayo zingenzeka.
Isihlabathi singahlanzwa ukuze singabi uthuli futhi singangena ngephutha ilanga lomntwana, futhi asishintshi, uma udinga ukwakha inqaba noma "ukubhaka amaphiko". Kungcono ukwenza lokhu ngamanzi kusuka ekutheni amanzi, khona-ke amanzi awashayi futhi "iphalenda" ayisebenzi.
Ebusuku kungcono ukuvala i-sandbox nge-plywood noma i-cellophane ukugwema ukuvakashela izivakashi ezingahambelwanga.
Ngemuva kokuhamba, udinga ukusula ubuso bomntwana nge-napkin, futhi ugeze izinwele zakho nge-sese namanzi, shintsha izingubo futhi ugeze izicathulo zakho. Uma isitshalo sesihlabathi singena esweni, kufanele sihlanzwe ngamanzi ukusuka emaphethelweni angaphandle angena ngaphakathi. Ekhaya, ungasebenzisa umhluzi omusha we-chamomile, onomphumela wokulwa nokuvuvukala.
Kanye ngenyanga, udinga ukuhlola ukuhlola amaqanda we-helminths, kodwa akunandaba ukuthi ingane idlala kaningi kangakanani nesihlabathi. Lokhu kuzoveza ukutheleleka esiteji sokuqala bese uphulukisa lesi sifo ngaphandle kwemiphumela yengane yomntwana.
Izincomo kubazali ngemfundo engokwenyama yezingane
Indlela yokubhekana nokukhuluphala kwengane
Izinwele zikaMaxim Galkin "a la Hitler" azibaniki ukuphumula kubalandeli bakhe, isithombe
I-Fly-Lady - ukuhlanza owesifazane wanamuhla
I-biography yomdlali we-actress uRomy Schneider
Roll nge imbewu cherry kanye poppy
Isigqoko samantombazane amancane
Yiziphi amadoda okufanele agwenywe kwi-intanethi
Isisu sokugaya u-Alena Apina oneminyaka engu-52 sasihlekwa usulu kwi-intanethi
Roll nge ham, isipinashi kanye noshizi
Ukusebenza okusebenzayo: imikhiqizo, izakhiwo zabo nokubunjwa
Tatiana Dogileva, impilo yangasese
I-Orange pie ngamantongomane